5 eziokwu banyere okpomoku uwa | Network Meteorology
Sergio Gallego | | Mgbanwe ihu igwe, Amụma
O di nwute, Taa enweghị mmata a ma ama banyere ihe niile gbasara mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa. Otutu ndi mmadu achoghi iche maka nsogbu ojoo mgbanwe onodu ubochi na-ebute gburugburu uwa.
Mgbe ahụ m ga-agwa gị 5 eziokwu banyere okpomoku zuru uwa ka i wee mata otu o siri di njọ na otu osi dikwa mkpa ichota ihe osisa n’uzo kachasi ike.
Kemgbe 1880, ọnọdụ okpomọkụ gburugburu ụwa gbagoro site n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ogo. Ọ dị egwu na n'oge dị mkpirikpi, ọnọdụ okpomọkụ ebiliwo nke ukwuu. Ihe kachasị njọ bụ na amụma ndị ahụ enweghị nkwa ọ bụla ma kwuo na mmụba ahụ nwere ike ịdị ukwuu karịa.
Oke osimiri ahụ arituola n’afọ ndị a n’ihi agbaze nke okporo osisi na glaciers. Mmụba a nwere 8 centimeters na afọ 20 gara aga na ndị ọkachamara na-ebu amụma na ka ọ na-erule ngwụsị nke narị afọ ahụ, ọkwa ahụ n'onwe ya ga-ebili site na otu mita.
Oge na-akawanye njọ na bụ na winters na-ajụ oyi ma oge ọkọchị na-ekpo ọkụ karị. Eziokwu a ga - etolite n’ime ọtụtụ afọ.
Okpomoku nke uwa na eme ka umu anumanu na-anwuchapu. Ihe data ahu na-awụ akpata oyi n’ahụ na ka ọ na-erule n’etiti narị afọ, a na-atụ anya na otu nde ụdị anụmanụ ga-apụ na ihu Earthwa.
N'ime afọ 50 gara aga, Ugwu ice nke North osisi toro site na mpaghara 15 kilomita kilomita ruo 13 nde kilomita kilomita. Ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ice cream kilomita abụọ furu efu.
Enwere m olileanya na 5 eziokwu a banyere okpomoku ụwa na-enyere gị aka ịmara mkpa ọ dị ilekọta mbara ala ka o kwere mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » 5 eziokwu banyere okpomoku uwa